Home News Maxuu yahay Howlgalka Soomaaliya ka bilaabanaya Sanadka Cusub
Maxuu yahay Howlgalka Soomaaliya ka bilaabanaya Sanadka Cusub
Midowga Africa ayaa laga sugayaa ansixinta howlgal cusub oo golaha amaanka iyo nabadgalyada Midowga Africa ansixiyeen, kaasi o la doonayo in Al Shabaab looga saaro Soomaaliya.
Howlgalka ayaa la filayaa inuu bilowdo horaanta sanadka cusub oo maalmo ay ka harsan yihiin, waxaana qorshaha uu yimid kadib kulamo kala duwan ay yeesheen saraakiisha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya.
Howlgalkaan oo loogu magacdaray ARAGTIDA HOWLGALKA ayaa wuxuu intiisa badan ka dhacayaa gobolada ay ku xoogan yihiin AL Shabaab sida Jubbooyinka, Gedo, Baay iyo Shabeelaha Hoose.
Afhayeenka Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Richard Omwega ayaa sheegay in howlgalkan uu billaabanayo bisha Koowaad ee sanadka cusub islamarkaana kaliya uu sugayo ansixinta Midowga Afrika iyo waddamada ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
Qorshaha Koowaad ee howlgalka ayaa ah sidii Al Shabaab looga saari lahaa meelaha ay ku xoogan yihiin, iyadoo qorshaha labaad uu yahay sidii ciidamada dowladda loogu diyaarin lahaa la wareegida amaanka Soomaaliya.
Kaliya Dalalka Uganda iyo Kenya ayaa diiddan qorshaha dhimista AMISOM iyaga oo ku adkeysanaya in inta Soomaaliya ay ka noqoneyso meel amaan ah aan laga bixin lana dhimin Ciidanka AMISOM.
Previous articleKooxda Al-shabaab oo sheegtay in uu dirqi uga baxsaday Yuusuf Dabageed!!
Next articleKulan Soomaaliya muhiimm u ahaa oo dib loo dhigay(Ogoow sababta)
Kheeyre oo Qaar ka mid ah Odayaasha hawiye Lacag Ku siinaya...